H&M ကနေ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Brand New “Nyden” – FemaleWear.net
၂၀၁၈ အစောပိုင်းမှာ H&M ကနေ announce လုပ်လိုက်တဲ့ brand အသစ်ကတော့ Nyden ဆိုတဲ့ brand ဖြစ်ပါတယ်။ Nyden ကို Swedish word အနေနဲ့ ‘new’ and ‘it’ လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Nyden ကို ဉီးဆောင်မဲ့သူကတော့ Oscar Olsson ဖြစ်ပြီး H&M ကို 2013 ကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Nyden မှာတော့ millennial အသက်ရွယ်တွေအတွက် အဓိကထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Nyden ကို အနာဂတ်ရဲ့ Fashion မှာဉီးဆောင်စေပြီး Nyden ရဲ့ဆိုင်ကွဲတွေကိုတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ဖွင့်မှာလို့လည်းသိရပါတယ်။ H&M လို quality ပိုင်းကို အဓိကဉီးစားပေးဆိုတာကိုလည်း ပြောပြထားပါသေးတယ်။
Millennial တွေကို ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်တဲ့ တခြားအမှတ်တံဆိတ်တွေ များစွာရှိပေမဲ့လည်း Nyden ကတော့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနောက်ကို သိပ်မလိုက်ဘဲ traditional fashion ဘက်ကိုသွားမယ်လို့လည်း ပြောကြားထားပါသေးတယ်။ ‘affordable luxury’ ဆိုတဲ့အတိုင်း Nyden ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို limited တွေအဖြစ် ထုတ်လုပ်သွားမယ်။ စျေးနှုန်းကိုလည်း product ပေါ်မူတည်ပြီး သတ်မှတ်သွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ Nyden ရဲ့ ပထမဉီးဆုံး actress တွေကတော့ Noomi Rapace နဲ့ tattoo artist Doctor Woo တို့ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ Nyden ကို သီသန့်ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်လို့ via တွေကိုတော့ စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ Olsson က The New York Magazine ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Nyden ရဲ့ Instagram ကို follow လုပ်ပြီတော့လည်း update တွေကိုစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။
Finally foundaboro bear ?
A post shared by Doctor Woo (@_dr_woo_) on Mar 25, 2017 at 4:41pm PDT
Photo shoot today for What Happened To Monday. #whathappanedtomondaythemovie #photoshoot #behindthescenes
A post shared by Noomi Rapace (@nmrpmimi) on Nov 8, 2015 at 8:55am PST
Tags: Affordable, Brand News, H&M, Luxury, Millennial, Nyden